အောက်တိုဘာ 27, 2021 -
အောက်တိုဘာ 27, 2021
#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p2331#31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p-10+00:003131+00:00x31 27မနက်31မနက်-31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p10+00:003131+00:00x312021ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +000014101410မနက်ဗုဒ္ဓဟူး=1153#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p+00:0010#2021#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p2331#/31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p-10+00:003131+00:00x31#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p+00:0010#
#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p2331#31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p-10+00:003131+00:00x31 27မနက်31မနက်-31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p10+00:003131+00:00x312021ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +000014101410မနက်ဗုဒ္ဓဟူး=1154#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p+00:0010#အောက်တိုဘာ#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p2331#/31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p-10+00:003131+00:00x31#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p+00:0010#
#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p2331#31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p-10+00:003131+00:00x31 27မနက်31မနက်-31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p10+00:003131+00:00x312021ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +000014101410မနက်ဗုဒ္ဓဟူး=1155#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p+00:0010#27#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p2331#/31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p-10+00:003131+00:00x31#!31ဟူး, 27 Oct 2021 10:14:23 +0000p+00:0010#
Covid 19 ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ လိင်ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာပေး
Oct 27, 2021 HopeComment on ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ရာသီနောက်ကျရင်…
” ဆရာရေ ဒီလရာသီမပေါ်သေးလို့၊ အရင်လက ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲ “” ဒီလ ရာသီလာတာ နည်းလို့ ” ” ဆရာအရင်လက ရာသီအရမ်းများတယ် ”
Oct 27, 2021 HopeComment on ဘာကြောင့်သွေးထွက်သံယိုတစ်ခုခုထိခိုက်မိတာနဲ့ ATT ကိုထိုးခိုင်းကြတာလဲ?
ဘာကြောင့်သွေးထွက်သံယိုတစ်ခုခုထိခိုက်မိတာနဲ့ ATT ကိုထိုးခိုင်းကြတာလဲ? လူတိုင်း တစ်ခုခုထိခိုက်မိလို့ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်တိုင်းမှာ ATT ဆိုတဲ့ဆေးထိုးဖူးကြပြီး ATT နဲ့မစိမ်းကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ATT ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ထိုးရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကို ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Oct 27, 2021 HopeComment on ပိုးသတ်ဆေး အမြဲသောက်လို့ရလား?
” ဝမ်းပျက်နေတယ် ဆရာ၊ ကျွန်မ မက်ထုံ (အရပ်စကား) Metro သောက်ထားတယ်။ “” ဟဲ့ ဒီဆေးသောက်ကြည့်ပါလား၊ ကိုဗစ်မှာပေးတဲ့ဆေး အဇီသို (Azithro) လေ၊
Oct 27, 2021 HopeComment on ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ ဆံပင်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ?
ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ ဆံပင်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ?“မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံး”ဆိုတဲ့ ရှေးမြန်မာဆိုရိုးလိုပါပဲ။ လှပချော့မွေ့တဲ့ ဆံကေသာကို အမျိုးသမီးတိုင်း မြတ်နိုးကြပါတယ်။ လှသထက် လှအောင်ကြိုးစားကြတဲ့အခါ ဆံပင်လှအောင် Hair Products တွေ၊
Oct 27, 2021 Hope
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ လုပ်လက်စကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဆက်လုပ်သင့်လား?-ကိုဗစ်ရောဂါခံစားပြီးနောက် သက်သာသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လုပ်လက်စကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ခနရပ်ထားပြီး အနားယူသင့်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးကသိရှိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုအနည်းနဲ့အများ ခံစားရနိုင်တာမို့ လုပ်လက်စရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ခဏရပ်ထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိတဲ့သူတွေနည်းနေတာမို့လို့